Taratasy iray ho an'ny namantsika rehetra-manoro hevitra ny fomba hisorohana ny covid-19
Ankehitriny, mihoatra ny teo aloha, amin'izao fotoanan'ny filàna izao, ny fanohanan'ny tsirairay dia lasa iraka ho antsika. Miara-mandroso isika miaraka amin'ny faharetana sy fahatokisana manoloana ny tsy fahatokisana.
Rehefa miezaka mafy miaro ny fahasalamana sy tsara ho an'ny tenantsika izahay dia te-hizara ny fomba fiasantsika hisorohana ny COVID-19. Manantena anao fa hahazo ny soa azo avy amin'izany ianao.
1, azafady atao ny mitafy saron-tava raha ivelan'ny tranonao no tena zava-dehibe indrindra raha araka ny hevitro izany
Faha-2, andramo atao mba tsy ho mifandray amin'ny tanana amin'ny hafa
Faha-3, rehefa miverina mody ianao, azafady vonoina ny bakteria tsy latsaky ny 75% alikaola
Faha-4, manandrana fanatanjahan-tena bebe kokoa hampahatanjaka ny vatanao
5th, misotro rano betsaka isan'andro.
Rehefa azonao ny fonosana,
1, vonoy aloha ilay otrikaretina,
2rd, azafady tehirizo ny adiny mandritra ny 3 ora eo amin'ny toerana maina sy mangatsiatsiaka, raha ny vaovao azo avy amin'ny valiny, dia tsy hiainana mihoatra ny 3 ora mahazatra eny amin'ny habakabaka ny tsimokaretina.
Miaraka amin'ny vondron'izao tontolo izao ny fontsika sy ny eritreritsika. Ny fanantenantsika dia ny ho tonga andry optimista sy firaisan-tsaina eo am-pandehanana io fotoana tsy mbola nisy io. Miara-mitsangana aminao izahay sy ireo olon-tianao.